I-China i-92% ye-Alumina yodongwe yokuGcina i-Steel Fabrication esuka kwiFektri Ukubonisa ukuveliswa kwesiko kunye nabathengisi YUNFENG
Iipesenti ezingama-92 zeAlumina zeCeramic Lining Steel Fabrication ezivela kwiFektri Ukubonisa ukulungiswa kwesiko
Microcrystal wear-resisting alumina circular tube * Ithathiwe indawo yesicelo: i-oyile, imigodi, iindawo zentsimbi, izixhobo zombane kunye nezinye izinto zorhwebo ezihambisa izixhobo okanye izinto ezinxiba umphezulu kulwelo oluhamba ngombhobho. * Kuthathwe uphawu lweemveliso: ukumelana ne-abrasion elungileyo; Ubulukhuni be-mohs bunokufikelela kwi-9.0 * Kuthathwe indawo yesicelo: Iindawo zesicelo: Ioyile, imigodi, amatye okusila, izityalo zamandla kunye namanye amashishini kumphezulu wesixhobo okanye izinto ...
Microcrystal banxibe-ukumelana alumina ityhubhu setyhula
* Ithathiwe indawo yesicelo: i-oyile, imigodi, iintsimbi zokugaya, izixhobo zombane kunye nezinye izinto zorhwebo ezihambisa izixhobo okanye izinto ezinxiba impahla kumgangatho wolwelo ohamba kumbhobho.
* Ithathwe indawo yesicelo: Iindawo zokufaka:
I-oyile, imigodi, amatye okusila, izityalo zamandla kunye namanye amashishini kumphezulu wesixhobo okanye izinto ezihambisa ulwelo oluhamba ngombhobho onxiba izinto ezinganyangekiyo, isiphumo esiphambili kukulwa ngokufanelekileyo iimpembelelo zempembelelo yezinto zodonga ezidlulisiweyo.
Ukucofa okubunjiweyo okomileyo, ubushushu obuphezulu, ubunzima be-rockwell HR80-90, okwesibini kuphela kwidayimani.
Ukwengeza: Imveliso ungenziwa ngemfuneko ngokwe imizobo abathengi
* Izinto eziluncedo:ukunxiba-ukuxhathisa, ukumelana nefuthe, ukwakhiwa okufanelekileyo, njl., ukusebenza kwayo kwe-theory kukulingana namaxesha angama-260 esinyithi se-manganese, i-chrome yentsimbi, amaxesha angama-170. Ngaba ngokukuko ukwandisa ubomi benkonzo yokunxiba iinxalenye.
Ingubo yodongwe yokunxiba yenzelwe ukuba inganyangeki kakhulu kukungxala nokuba kukuhamba okuphezulu kwezinto kunye nesantya, kuthintela ukwakheka kwezinto. Ibonakalise ukuba ibaluleke ngokukodwa ekunxibeni imigodi kunye nokusetyenziswa kwezicelo. Njengempahla, i-ceramic inezinto ezichasayo zokulwa nokubola ezandisa ubomi bokunxiba kunye nokuphucula ukunganyangeki. Ukufakwa kweCeramic kunciphisa nengxolo kunye nongcangcazelo.
Izicelo eziqhelekileyo zelining ceramic zezi: Umbala wechute, ityhubhu yokuhambisa, ulungelelwaniso lweklasta yesiqwengana, i-Hopper lining, i-Pipe lining, i-Pulley lining, i-Spout lining, i-Transfer point lining, Nasiphi na esinye isicelo
I-Alumina ceramic inokulungelelanisa ubungakanani beetera yodongwe, imilo, kunye nokubekwa kwethayile yodongwe ukuhlangabezana neemfuno ezithile zokunxiba kwizixhobo zakho zezityalo. Sinokusebenzisa idatha ngqo yenkqubo kwimisebenzi yakho ukuyila kunye nokwenza isisombululo sombane esidibana neethagethi zemveliso yakho.
Inkonzo yobomi obude-iindleko eziphantsi eziphantsi
Kwizicelo ezininzi iipropathi zelineni ezifanelekileyo ziziphumo zokudibanisa ezona mpahla zezinye izinto kunye neseramikhi.
Ukudibanisa izinto ezahlukeneyo kuqinisekisa ubomi obude ngakumbi xa kuthelekiswa nezinye izinto zokukhusela. Izinto ezinqabileyo ezinzima zeceramic zibonelela ngokungafaniyo nokunxiba ngokuhambisa, ngelixa iipropathi zelastiki zezinye izinto ezinje ngerabha ngokufanelekileyo zifunxa iimpembelelo zothuko. Singayila kwaye senze ulwelo lokunxiba sisebenzisa iiseramikhi, irabha, isinyithi, i-polyurethane, kunye nokudityaniswa kwezi zinto.
I-ceramic linings iveliswa kumaziko ethu asebenzisa iinkqubo eziqinisekileyo zokuqinisekisa umgangatho kuwo onke amabakala ophando, uphuhliso, uyilo kunye nemveliso. Oku kubangela umgangatho ophakamileyo, ofanayo kunikezelo lonke. Ubungakanani obuchanekileyo kunye nokunyamezelana okusondeleyo kuqinisekisa ukuba ulwelwesi lwakho lweceram luphendula kwiimfuno ezifunekayo.
Egqithileyo I-Hexagonal Ceramic Wear-Resistant Liner Hopper Nxiba iCeramic Liner Plate Coal Hopper
Okulandelayo: Iiceramic-Lined 92% Alumina Ceramic Tile yokunyibilikisa izityalo
Alumina cones yodongwe
I-Alumina Ceramic Cylinder yesinyithi sePayipi
Alumina Lining yodongwe Steel Bend Tube
Alumina Umbhobho yodongwe
Alumina Tube yodongwe
Ububanzi obukhulu beCone Tube yeAlumina Ceramic
Nxiba Pipe Resistant Alumina Liner